AdSense: Sidee Aagga looga Saaraa Xayeysiinta Gawaarida | Martech Zone
AdSense: Sida Looga Saro Aag Xayeysiiska Aaladda
Isniin, Oktoobar 5, 2020 Isniin, Oktoobar 5, 2020 Douglas Karr
Shaki kuma jiro qofkasta oo booqda degelkeyga inuusan ogeyn inaan ku maamulo barta Google Adsense. Waxaan xasuustaa markii iigu horreysay ee aan maqlo Adsense oo la sharraxay, qofka ayaa yiri waa Daryeelka Mareegaha. Waxaan u muuqdaa inaan oggolaado, xitaa ma daboolayo kharashyada martigelinta. Si kastaba ha noqotee, waan ku qanacsanahay dib-u-dhigista kharashka degelkeyga iyo Adsense ayaa si qurux badan loogu bartilmaameedsaday qaabkooda xayeysiinta ku habboon.
Taasi waxay tiri, inyar kadib waxaan wax ka badalay nidaamyadayda 'Adsense' anigoo ka saaray dhamaan gobolada laga heli karo degelkeyga taas bedelkeedana, waxaan u suuragaliyay Adsense inay hagaajiso meesha ay dhigtay xayeysiinta.
Waxaan u ogolaaday Adsense inay hagaajiso meelaynta xayeysiinta bilo yar oo aan arko waxoogaa kor u kaca ah dakhligayga bilaha ah. Si kastaba ha noqotee, calamada weyn ee Google ay dhigeyso kor ku xusan my gallery gallery ee articles gabi ahaanba waa wax laga xumaado:
Ka soo horjeedda waxa aad u maleyn karto, Xayeysiisyada otomaatiga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad maamusho gobolada iyo tirada xayeysiiska ee Google ay dhigeyso bartaada. Haddii aad gasho Google Adsense, xulo Xayeysiis> Guudmarka:
Dhinaca midig, waxaa ku yaal badhanka wax ka bedelka qoraalkaaga. Markaad gujiso badhankaas, bogga wuxuu ku furmayaa labada desktop iyo nooca mobilada ee goobtaada oo aad ka arki karto meesha Google ay dhigeyso xayeysiintaada. Iyo, sida ugu fiican oo dhan, waxaad dhab ahaantii ka saari kartaa gobolka gebi ahaanba. Tan waxaan ku sameeyay bannerka madaxa xun ee nacaybku ku jiray oo qabsaday goobtayda oo dhan.
In kasta oo banner-kaasi laga yaabo inuu kexeeyo dakhli riix badan, haddana wuxuu ku xun yahay waayo-aragnimadayda isticmaale oo wuxuu iga dhigaa inaan u ekaado inaan ahay qof spammer ah oo isku dayaya inaan sameeyo lacag. Gobolka ayaan ka saaray.
Waxaan sidoo kale diiday tirada ugu yar ee xayeysiinta bog kasta illaa 4. Waxaad ka heli kartaa taas qaybta Ad Load ee midigta iyo dhinaca. 4 waa tan ugu yar ee ay kuu ogolaanayaan inaad doorato.
Waxaa jira ikhtiyaarro kale oo aad awood u yeelan karto oo aad ka joojin karto boggaaga, oo ay ku jiraan xayeysiisyada bogga ku jira, waxyaabaha ku habboon, xayeysiisyada barroosinka, iyo xayeysiiska vignette ee ah xayeysiis shaashad buuxda ah oo ka muuqda inta udhaxeysa bogga.
Maaddaama aan ahay madbacad siineysa tan cilmi baaris iyo macluumaad bilaash ah, waxaan rajeynayaa inaadan waxba ka qabin inaan lacag ku iibsado barteyda. Isla mar ahaantaana, runtii ma doonayo inaan ka careysiiyo dadka oo aan ka joojiyo inay soo noqdaan!
Tags: xayeysiiska otomaatigagoogle AdSensesida loolacag daabacanBixi halkii gujimeesha ka saar
Dib u soo noolee bulshada: Ku soo dir Mawduucaagii hore Warbaahinta Bulshada